Family Guy ane mukurumbira chaizvo TV taridzai anodiwa makirasi uye vazhinji. IGT akabata anoratidza uye akaita naro rive mutambo slots uye izvo akagamuchirwa zvakanaka nokuda vatambi. Vatambi vari kuenda gaga pamusoro ichi slots mutambo. Rine vatambi pamwe nevamwe kunakidza zvinhu uye Unobata yakakura.
Family Guy kunokudziridzwa nokuda guru baba ari uchitamba mutambo wacho nyika, IGT. IGT kana International Gaming Technology ndeimwe zvikuru nevanhu paIndaneti slots mutambo Developers. IGT akanga apfuura kuzivikanwa Gtech S.p.A uye Lottomatica S.p.A. Zviri vemarudzi akasiyana-siyana mutambo yokuvaka kudzimbahwe muLondon uye mikuru mahofisi yaiva muRoma, Las Vegas uye Providence.
Mugore 2015, ichi kambani akatora pamusoro International Gaming Technology uye dzakatora zita iri kambani.
Family Guy Zvinotora varidzi rwendo pamwe neshamwari zita Brian, Peter, Lois, Chris, Stewie, Meg neshamwari dzavo. Rine Gwenzi shanu matatu paylines. Zviri pamusoro mafaro, varaidzo uye mari.
Zviratidzo zvinosanganisira zvose vevatambi kubva Griffin Family. Zvimwe zviratidzo zvinosanganisira okusava, Joe Swanson uye Cleveland.
Musoro slots unofadza zvikuru. IGT akaita basa guru panyaya pamasikiro. The Animations ndiwo emavambo vakataura zvainakidza. Vatambi vari kutoziva paTV vaizoziva mazwi nokunzwa. Game slots inopa vakawanda zvinoshamisa bonuses kuti vatambi. Pane yakawanda bhonasi vaitenderera, multipliers uye vakasununguka Tunoruka iyi inomutsa mutambo. Zvinhu izvi kupa mutambi mukana kuti guru uye vane zvizhinji zvinonakidza.
Vatambi achawana zvinhu sezvinoita Amazing Guy Remake, World bhonasi Feature, Nezvidhakwa clam bhonasi, Chicken Fight bhonasi, Lois 'Hot Free Tunoruka bhonasi, Petro Feature, Stewie kuti Feature, Brian kuti Feature uye Lois 'Feature. All zvinhu izvi zvikuru kunonakidza uye kubatsira mutambi kubudikidza kusvetuka uye miganhu kuti kuzadza kubhengi rake chaicho mari mibayiro.
Family Guy ndiwo mutambo mitemo nyore. Kune itwa zvinhu vanorichengeta zvinofadza uye kunoitawo kuti mari. Iwo anofanira kutamba nokuti vatambi achitsvaka nyore- breezy uye mafaro mutambo.